บ้านบุญชู I-Ban Boonchu Bed and Breakfast - I-Airbnb
บ้านบุญชู I-Ban Boonchu Bed and Breakfast
Phra Nakhon Si Ayutthaya, i-Thailand
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Kittiya
U-Kittiya uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Kittiya izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indlu yamapulangwe yase-Thailand, eseduze nendawo ye-Park yomlando, imizuzu engu-10 nje kuphela.walk. Jabulela ukungenisa izihambi kwendabuko yase-Thailand okunokunethezeka kwesimanje. Imakethe yasebusuku lapho ungathola khona ukudla kwendawo kwase-Thailand kuqhele ngamamitha angu-200, futhi izindawo ezinhle zokuphumula ziseduze.
Indawo yethu ayibhemi!
Ikamelo lethu linombhede omkhulu, i-air-con, ideski lokubhala, i-TV, isiqandisi esincane, amanzi ashisayo, umshini wokomisa izinwele ne-Wifi yamahhala.
Sitholakala ehhovisi eliyinhloko lamaphoyisa e-Ayutthaya.
Uma ufika e-Ayutthaya ngesitimela, siqhele ngemizuzu engu-5 kuya kwengu-10. ukusuka esiteshini sesitimela. Ungathatha i-uktuk (itekisi yasendaweni) usuka esiteshini sesitimela, iningi le- tuktuk lazi indawo yethu.
Uma uza ngebhasi elincane, siqhele ngamamitha angu-600 ukusuka esiteshini sebhasi elincane.
Indawo yethu iseduze ne-Buang Phra Ram park & Wat Mahat, eqhele ngamamitha angu-600. Kunezindawo ezimbalwa ezinhle zokuphumula eduze ne- kanye nesitolo esilula se- "7-eleven" ekhoneni. Ebusuku kunemakethe yasebusuku eqhele ngamamitha angu-200 lapho ungathola khona izinto eziningi kuhlanganise nokudla.
Sizokunikeza ibalazwe le-Ayutthaya futhi sikunikeze iseluleko ngendawo ethandwayo nezindawo zokuheha izivakashi okuhlanganisa indlela yokuhambahamba nokuthi ungadla kuphi.